Seychelles waxay soo dhoweyn doontaa Maraakiibta Maraakiibta ee Dib -u -soo -celinta bisha Nofembar 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles waxay soo dhoweyn doontaa Maraakiibta Maraakiibta ee Dib -u -soo -celinta bisha Nofembar 2021
Jebinta Wararka Caalamka • saaciday inay • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Bilaabashada xilliga dalxiiska ee 2021-2022 bisha Nofeembar 14, 2021, waxay noqon doontaa MS Island Sky, oo ah markabkii ugu horreeyey ee doonta ee u shiraacda Seychelles tan iyo markii la xiray goobtii ay marayeen maraakiibta maraakiibta bishii Maarso 2020. Sida ku cad go'aanka ay qaateen mas'uuliyiinta dalka Bishii Maarj 2021 ee la xiriirta baaxadda maraakiibta iyo xaddididda awoodda rakaabka, Seychelles waxay soo dhoweyn doontaa oo keliya maraakiibta yaryar oo ugu badnaan 300 oo rakaab ah.
Island Sky wuxuu ahaa goob joogto ah biyaha Seychelles kahor masiibada.
Dekedaha wicitaanada waxaa laga samayn doonaa afar jasiiradood oo ka baxsan Seychelles - Aldabra, Assomption, Farquhar, iyo Cosmoledo.
Dawladdu waxay wadashaqayn la leedahay mas'uuliyiinta caafimaadka, waaxda dalxiiska, maamulka dekedda, iyo warshadaha dalxiiska, waxayna hirgelisay habab cusub oo oggolaanaya in si nabadgelyo leh dib loogu bilaabo safarka maraakiibta.
Island Sky, oo ay maamusho Noble Caledonia oo fadhigeedu yahay London, waa markab yar oo dalxiis ah oo qaada 118 rakaab ah; muuqaal joogto ah oo ku yaal biyaha Seychelles ka hor masiibada, waxay wici doontaa afar ka mid ah jasiiradaha dibadda ee Seychelles, oo kala ah Aldabra, Assomption, Farquhar iyo Cosmoledo. MS Island Sky waxaa raaci doona maraakiib kale oo yar yar oo dalxiis xilliyeedka oo dhan.
Xoghayaha Guud ee Duulista Hawada, Dekedaha & Badda, Mr. Alan Renaud, ayaa sheegay in sannadka 2020 oo dhan, iyadoo lala kaashanayo mas'uuliyiinta caafimaadka, waaxda dalxiiska, maamulka dekedda, iyo warshadaha dalxiiska, waaxdu, ay hirgeliyeen habab cusub oo u oggolow in si ammaan ah dib loogu bilaabo markabkii dalxiiska booqashooyinka Seychelles.
PS Renaud wuxuu yiri si loo fududeeyo dib-u-bilaabashada howlaha maraakiibta maraakiibta, Waaxda Duulista Rayidka, Dekedaha & Badda ayaa soo saartay Shirkad COVID-19 iyo Liiska Hubinta Maraakiibta Cruise ee hawlwadeennada maraakiibta, iyo isbarbar dhigga Qorshaha Maareynta Dekedda COVID-19 ee mas'uuliyiinta in la soo bandhigo bisha soo socota. Dukumiintiyada dhammaystirka ah waxay ku salaysnaayeen hagitaan ay si wada jir ah u daabaceen Wakaaladda Badbaadada Badaha Yurub (EMSA) iyo Xarunta Xakamaynta Ka-hortagga Cudurrada (ECDC) oo ay oggolaadeen Ururka Caalamiga ah ee Badaha (IMO), waxayna qaateen hannaan ku saleysan yool, tallaabooyin lagu qaadayo maraakiibta iyo xeebaha si loo hubiyo hawlgallo ammaan ah.
"Dukumiintiyadu waxay muujinayaan mas'uuliyadaha kala duwan ee hay'adaha maxalliga ah iyo maraakiibta maraakiibta ee la xiriira arrimaha COVID-19, aqoonsiga ilaha muhiimka ah iyo shaqaalaha, rakaabka iyo diyaarinta terminal dhammaan dekadaha wicitaannada, xaaladaha ka dhalan kara haddii uu dillaaco COVID-19 , ilaalinta bulshooyinka uu markabku booqday, iyo, guud ahaan, isku-duwidda maraakiibta iyo dekedaha ee la xiriira COVID-19, ”ayuu yiri PS Renaud.
Waaxdu waxay sidoo kale soo daabici doontaa nooc badda ah oo ah nidaamka oggolaanshaha socdaalka ee hadda jira, kaas oo la waafajin doona maraakiibta iyo doonyaha maraakiibta, isla mar ahaantaana u adeegi doona sidii nidaam ilaalin caafimaad iyo sidoo kale nidaam xakameyn xuduudeed oo la xoojiyay oo loogu talagalay maraakiibta imanaya. Daabacaadda badda waxaa lagu dari doonaa nidaamyada maraakiibta waxayna ka dhigi doontaa hab aan kala go 'lahayn, bilaa warqad ah, oo aan la taaban karin oo loogu talagalay soo -dhoweynta iyo ka -dejinta martida iyo maraakiibta laftooda.